Robotics Logic Fuzzy - Geofumadas
Abriil, 2021 Engineering, tabo cusub, dhowr
Laga soo bilaabo naqshadeynta CAD si loo xakameeyo hal software
Robotics macquul ah oo waalan wuxuu ku dhawaaqayaa soo bandhigida nooca koowaad Istuudiyaha qayaxan™ Shirkadda Hannover Messe Industry 2021 taas oo calaamadeyn doonta u jeesashada wax soo saarka robotka rogrogmi kara.
➔ Adiga oo jiidaya oo ku ridaya qaybo CAD ah 3D mataanahaaga dijitaalka ah, dariiqooyinka qalafsan ee isku dhafan ayaa si otomaatig ah loo soo saaraa loona diraa aaladda wax soosaarka iyada oo hal guji la riixayo. Dhammaantood oo leh barmaamij caalami ah oo barnaamij ah.
Laga soo bilaabo jilitaanka qad la'aanta illaa xakameynta waqtiga-dhabta ah, softiweerka Istuudiyaha qayaxan™ Waxay baabi'ineysaa farqiga u dhexeeya jilitaanka iyo xaqiiqda si loo yareeyo waqtiga dhimista loona hagaajiyo habsami u socodka shaqada.
➔ Injineernimo laga soo bilaabo dhulka illaa laga soo bilaabo si si weyn hoos loogu dhigo baahida loo qabo khibradda aaladaha robot-ka iyada oo ay ugu wacan tahay tikniyoolajiyadda mataanaha casriga ah ee waqtiga dhabta ah ee code-bilaashka ah.
Can Waad u kala beddeli kartaa wax kasta oo aalado samee ah iyo moodeel laba qasab ah si aad u hesho ikhtiyaarka saxda ah ee arjigaaga, adigoon u baahnayn inaad wax ka beddelatid barnaamijyada ama ku celceliso hawlaha naqshadeynta waqtiga qaadanaya.
➔ Waxay maamushaa xitaa barnaamijyada qalafsan ee robotka ah waxaana heli kara shirkadaha noocyadooda kala duwan.
Dhibaatada ilaa hadda
Labada aaladaha wax soosaarka iyo wada shaqeynta labaduba aad ayey qaali u yihiin si loo gaaro wax soo saar runti dabacsan sababo la xiriira kakanaanta barnaamijka iyo isdhexgalka Waqtigan xaadirka ah wax yar oo ka mid ah codsiyada wax ka qabashada, sida xulashada-iyo-meesha, ayaa runtii si fudud loogu heli karaa kuwa aan khubarada ahayn sidaas darteedna waa kuwo kharash-ku-ool ah soo-saarka dabacsan.
Si kastaba ha noqotee, inta badan barnaamijyada 'robotics' iyo codsiyada 'cobotics' waxay u baahan yihiin qalab software oo adag oo kaladuwan, iyo sidoo kale khabiiro caan ah. Qalabkani wuxuu u baahan yahay tababar iyo khibrad weyn.
Natiijadu waxay tahay in ka badan 75% wadarta guud ee aaladda robot ee lahaanshaha (TCO) ay la xiriirto tababarka iyo adeegyada softiweer ee wax soosaarka tirada ee caadiga ah. Soosaarka dabacsan tiradaani waxay cirka isku shareeri kartaa 90% ee TCO-da sidaasna ay ku burburin karto soo noqoshada suurtagalka ah ee maalgelinta nidaamka robotka.
Xalka: waa madal dareen leh dhammaan tillaabooyinka
Istuudiyaha qayaxanWaa barnaamij caalami ah oo dareen leh oo jaraya kharashka barnaamijyada aaladaha aal-tobnaad. Iyadoo Fuzzy Studio factory warshad kasta si otomaatig ah si otomaatig ah otomaatig ahaan, si fudud iyo kharash ahaanba waxtar ugu yeelan karta, xitaa iyada oo la adeegsanayo farsamooyin adag, bixinta iyo alxamida codsiyada.
➔ Dareen leh oo fudud sida ciyaarta fiidiyowga
Isku-xirnaanta caadiga ah ee dhammaan noocyada aaladaha
Prec Xaqiijinta heerka warshadaha iyo waxqabadka waqtiga dhabta ah ee aaladaha robot-ka
Fuzzy Studio ™ wuxuu daboolayaa dhammaan heerarka nolosha ee unugyada robotka, laga bilaabo diyaarinta mashruuca, qaabeynta iyo u shaqeynta ilaa waqtiga dhabta ah wax soo saarka, dib u habeynta iyo dayactirka internetka.
Loogu talagalay in lagu dardar-geliyo korsashada iyo adeegsiga aaladaha robotics-ka ee dhammaan daneeyayaasha, laga soo saaro soo saarayaasha waaweyn ilaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, iskudhafka nidaamka iyo xitaa soosaarayaasha robotka OEM.
Ka dooro aalado maktabad ballaadhan
Ka baadh ururinta dhammaystiran ee moodooyinka aaladaha aaladaha la taageero oo ku shaandhe sifooyinka.
Ku soo deji faylasha CAD iyo 3D fudayd
Si dhakhso leh u abuur nidaam aalado aalado leh aaminnimo sare oo is dhexgal ah 3D iyo walxaha CAD. Noocyada la taageerayo: in kabadan 40 nooc oo ay kujiraan warshadaha CAD STEP iyo IGES.
Raadi Qalabka Midig Dhammeeya
Xullo xulashooyinka qalabka soo saaraha waaweyn ama soo dejinta aaladaha casriga ah. Dhammaan aaladaha ay taageerayaan waa furayaal oo wada ciyaara.
Abuur oo wax ka beddel dariiqyada qalabka si muuqaal ah
Ma jiro khadadka jahwareerka ee koodhka ama nidaamyada isku-duwidda. Muuqaal ahaan dhisa waddooyinka qalabka. Wax ka beddel waddooyinka waqtiga dhabta ah oo arag isbeddelada 3D.
Jiil otomaatig ah oo ku socda dhabbadka adoo jiidaya oo ridaya
U jiido oo ku daadiso walxaha 3D CAD naqshadeynta iyo algorithms-ka lahaanshaha waxay si otomaatig ah u abuuri doontaa waddooyin qalab oo ka fogaanaya isku dhaca, waqtiga badbaadiya, kordhinta waxqabadka iyo kor u qaadista amniga. Saacadaha ganacsiga ee shaqada foojignaanta dhowr qasab oo fudud.
Abuur nidaam dhameystiran bilaa sumad
Abaabul dariiqyada qalabka, qalabka, dareemayaasha oo iswaafaji I / O. Looma baahna in la qoro koodh.
Robotyada beddel oo shaqada sii wad
Thanks to algorithms-ka lahaanshaha, adeegsadayaashu waxay u kala rogi karaan aalado leh laba qasab oo ku yaal naqshadda si ay u helaan midka ku habboon shaqadooda. Dhammaan jidadka iyo geeddi-socodka si otomaatig ah ayaa dib loo xisaabiyaa oo is-waafajinta si fudud ayaa loo sixi karaa
Hal guji rakib
Thanks to algorithms xakamaynta go'aaminta waqtiga dhabta ah, "waxa aad ku aragto jilitaanka waa waxa aad ku heshay xaqiiqda." Codsi dhammaystiran ayaa lagu dhejin karaa hal guji robot-soo-saarka iyo ka-goynta farqiga u dhexeeya jilitaanka iyo xaqiiqda. Nidaamyada waa lala socdaa oo si toos ah iyo waqtiga dhabta ah ayaa loo hagaajiyaa.
Ku saabsan Fuzzy Logic Robotics
Robotics macquul ah oo waalan Waxay ka soo kacday machadyada cilmi baarista ee Robot-ka ee Faransiiska waxaana aasaasay koox Faransiis-Mareykan ah oo khubaro robot ah oo arkay qaab cusub oo loo xakameeyo loona barnaamijyo jiilka dambe ee codsiyada aaladaha. Thanks to macmiil duug ah oo ku jira warshadaha maqalka, aasaasayaashu waxay abuureen xal gebi ahaanba cusub si adeegsadayaasha aan khibrada lahayn ay ula falgalaan, u xakameeyaan una barnaamijyada aaladaha warshadaha ee codsiyada adag ee ay fuliyaan aalado kasta. Khibradooda waxay u oggolaadeen inay u wareejiyaan hal-abuurnimadan wershadaha.
Laga soo bilaabo Geofumadas waxaan ku faraxsanahay inaan kuu soo qaadanno dhammaan wararka la xiriira adduunka. Xaaladdan oo kale, Fuzzy Logic Robotics waxay soo bandhigeysaa xal fududeyn doona hababka maaraynta xogta CAD ee waqtiga-dhabta ah ee aaladaha. Shaki la'aan tani waxay inagu soo dhoweyneysaa waxa aan dooneyno kacdoonkii 4-aad ee warshadaha, halkaasoo howluhu yihiin otomaatig isla markaana ilaha lagama maarmaanka ah loo soo saaro maaraynta waqtiga fiican. Hadafka Fuzzy Studio waa inuu fududeeyo kacdoonka soo socda ee otomaatigga ah ee loo yaqaan 'robot automation' iyadoo la xallinayo caqabadaha lana beddelayo sida dadku ula macaamilaan una adeegsadaan aalado. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad soo booqato bogga Fuzzy Logic Robotics wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir iyaga ryan@flr.io anthony.owen@flr.io. Waan ka warqabi doonaa isbeddelka xalka si aan kuugu siino dhammaan faahfaahinta gacanta koowaad.
Post Previous" Hore IMARA.EARTH bilowga oo cabiraya saameynta deegaanka
Post Next ESRI Venezuela oo ay weheliso Edgar Díaz Villarroel oo loogu talagalay Twingeo 6th EditionNext »